‘कुनबेला आएर खेदाउँछन् थाहा छैन, कसरी भोट दिने खै ?’ | Ratopati
‘कुनबेला आएर खेदाउँछन् थाहा छैन, कसरी भोट दिने खै ?’
personश्याम राना मगर exploreकास्की access_timeमंसिर १०, २०७६ chat_bubble_outline0
पोखरा । ‘सय को डेढ किलो... सयको डेढ किलो... ल, भाई सुन्तला लिनुस् है लिनुस्... सुन्तला,’ मंगलबार पृथ्वीचोक बसपार्क अघि डोकोमा फलफूल बोकेका महिलाको झुण्ड पोखरा– काठमाडौं रुटमा चल्ने बसको झ्यालनेरै झुम्मिए । आफ्नो सामान बिक्री गर्न लालायित देखिन्थे ति ।
बसमा सवार केही यात्रुले सुन्तला लिए पनि । खुसी मुद्रामा प्लास्टिकको झोलामा सुन्तला दिएर यात्रुसँग पैसा लिँदै थिए । एक्कासी, सिठ्ठी बजाउँदै नगर प्रहरीको अर्को समूह आइपुग्यो । प्रहरीको जत्थादेखि सकेपछि हत्तपत्त ग्राहकसँग लिन बाँकी रहेको रकम पनि छाडेर ती महिलाहरु भागे । सानोतिनो म्याराथन नै सुरु भयो त्यहाँ । कोही चाइना पुलतिर कुदे, कोही बसपार्कभित्र छिरे, कोही शान्तिवनतिर । डोके महिलाहरुको झुण्ड एकैछिनमा यत्रतत्र छरियो ।
नगर प्रहरीको समूह पनि डोके महिलाको डोको समाउने प्रयास बिफल भएपछि लुरुलुरु आएकै बाटो फर्कियो । यस्तो घटना यो ठाउँमा बारम्बार दोहोरिरहन्छ । करिब १० मिनेटपछि प्रहरी गइसकेको चाल पाएर एकएक गर्दै बाहिर निस्किए महिलाहरु ।
‘धन्न ! गयो,’ डोके महिलाको झुण्डकी एक सदस्यले लामो श्वास फेर्दै भनिन्, ‘कस्सो लान्थ्योे ।’ त्यसपछि सबैजनाले गरि खान पनि नदिने भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पोख्न थाले । यो दृश्यलाई एकएक गर्दै नियालिरहेका हामी उनीहरुको नजिकै पुग्यौ । एकैछिनमा उनीहरुको व्यवसायका अप्ठ्याराहरुबारे कुराकानी गरिसकेपछि सिँगो देशकै ध्यान तानिरहेको कास्की २ को उपनिर्वाचनतर्फ उनीहरुलाई पनि तान्यौ ।
चुनाव आउँदै छ । सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुभएको थियो ? यसपालिको चुनावमा भाग लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न ? चुनाव जितेर जाने प्रतिनिधिले के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? हामीले सोध्यौ । ‘के गर्नु र केही गरेको छैन सरकारले,’ महिलाहरुको समूहबाट एकजना अघि सरेर बोलिन् । बोल्ने महिलाको नाम मिना सुनार रहेछ । ‘गरेर खान त दिन्न्,’ उनले आक्रोश पोखिन् ।
मीना पोखरा १७ छोरेपाटनको स्थायी बासिन्दा रहिछन् । अन्य व्यावसयामा धेरै प्रयत्न गर्दा पनि विफल भएपछि यो व्यवसायमा जोडिन आएकी रहिछन् । भोट त हाल्नुहुन्छ नि ? हामीले अर्को प्रश्न राख्यौ ।
‘कुन बेला आएर खेदाउँछन् थाहा छैन, कसरी भोट दिने खै ?’ जवाफमा उनले भनिन्, ‘भोट दिन त दिनुपर्ने होला नि !’
तेर्सापट्टीकि ७३ वर्षीया राममाया श्रेष्ठको पृथ्वीचोक चाइना पुलनिर मासु पसल छ । उनको परिवारै यो व्यवसायमा लागेको छ । ७३ को उमेरमा पनि राममाया सक्रिय रुपमा व्यवसायमा छिन् । बिहानदेखि बेलुकासम्म उनी पसलमै व्यस्त हुन्छिन् । उनका छोराबुहारीको महेन्द्रपुलमा मासु पसल छ ।
डोके महिला मीनालाई सोधिएका प्रश्न राममायालाई दोहो¥याएर सोध्यौं । ‘भोट दिएर के हुन्छ ?’ राममायाले भनिन्, ‘पानी खाने धारा पनि छैन । बोतलमा किनेर ल्याउनुपर्छ । ऊ भर्खरै ५० रुप्पे हालेर पानी किनेर बोरा धोएको ।’
मासुमा बसेका झिँगा धपाउँदै उनले थपिन्, ‘आफैं जित्यो, धनी भयो । हुँदो न खाँदो ।’ पहिले जति भए । त्यसयता विकास निर्माणको काम नेकपा सरकारले नगरेको उनको ठम्याई छ । पोखरा ९ शान्तिवन प्रदशनी केन्द्रको नजिकै सुकुम्बासी बस्ती छ । करिब २ सय हाराहारीमा घरधुरी रहेको यो सुकुम्बासी बस्तीमा प्रत्येक निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरु आउँछन् । सबैलाई लालपुर्जा दिलाइ दिने आश्वासन दिन्छन् । तर, चुनाव जितेर सत्तामा पुगिसकेपछि कहिले फर्केर आउँदैनन् ।
यो बस्तीको अघिल्तिर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यालय पनि छ । यही बस्तीकी बासिन्दा हुन् सावित्री वि.क. । अहिले उनी ६५ वर्षमा हिँड्दै छिन् । हामी पुग्दा उनी आफ्नै दैनिकीमा व्यस्त थिइन् । सावित्रीलाई पनि मीना र राममायालाई सोधेकै प्रश्न सोध्यौं । ‘हामीलाई त के चाहिन्थ्यो ?’ उनले भनिन्, ‘एउटा लालपुर्जा दिए, पुग्थ्यो ।’
बंगलादेशमा मारिएका हिन्दुको चिर शान्तिका लागि काठमाडौंमा दीप प्रज्ज्वलन
एमालेले विद्युतीय मतदानमार्फत नेतृत्व छान्ने
इञ्जिनियर कुशवाहालाई दुर्व्यवहार गर्नेमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसक्योः गृहमन्त्री खाण